Global Voices teny Malagasy » The Rising Voices – NewsFrames Mitady Mpitarika Fiarahamonina · Global Voices teny Malagasy » Print
The Rising Voices – NewsFrames Mitady Mpitarika Fiarahamonina
Voadika ny 25 Janoary 2017 3:45 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Miranah
Mitady Mpitarika Fiarahamonina NewsFrames – Rising Voices ny Global Voices (GV) mba handrindra ireo tantara mitohy vaovao ao amin'ny GV mikasika ny fisoloantenan'ny vondrom-piarahamonina atao anjorom-bala amin'ny fitantarana amin'ny fampahalalam-baovao.
Fiarahamiasan'ny NewsFrames – Rising Voices
Ity fiarahamiasa ity dia mikasa hanakambana ny tanjon'ireo sampana roa an'ny GV: Rising Voices sy NewsFrames. Amin'ny alalan'izany fiarahamiasa izany, hiezaka izahay hampihatra ny fitaovana sy ny fahaizana amin'ny fanadihadiana tahiry momba ny olan'ny fisoloantenan'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika ao amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra sy ny media sosialy.
Rising Voices (RV), ny hetsika fanentanan'ny GlobalVoices, dia miasa mba hanohana ireo vondrom-piarahamonina voahilikilika sy tsy voasolotena ka te hilaza ny tantaran'izy ireo manokana amin'ny fampiasana fitaovana an-tserasera amin'ny alalan'ny fanomezana fiofanana, fitaovana, famatsiam-bola madinika ary toro-lalana.
NewsFrames (NF) dia fisantarana andraikitra izay miresaka momba ireo fanontaniana zava-dehibe hatry ny ela teo amin'ny fiarahamonina GV: olana momba ny fanavakavahana amin'ny haino aman-jery, na ahoana na inona antony mahatonga ireo tantara sasany voarakotra tsy tahaka ny an'ny hafa (azo jerena bebe kokoa ato  ny momba ny NewsFrames).
Inona no Ataon'ny Mpitarika Fiarahamonina?
Miara-miasa amin'ny ekipan'ny RV sy NF, ny Rising Voices Community Lead no tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny famokarana tantara sy mampiroborobo ny tetikasa eo amin'ireo vondrom-piarahamonina sy vondrona mety ho liana, indrindra indrindra mandritra izany dingana voalohan'ny tetikasa eo amin'ny vondrom-piarahamonina teratany any Amerika Latina izany. Mety hahitana an'ireto ny andraikitra:
Mamolavola tantara mifandraika amin'ny fanadihadian'ny NewsFrames, anisan'izany ny fanoratana, manampy ny hafa hamolavola hevitra, hanitsy lahatsoratra sy hamoaka izany amin'ny aterineto;
Mampiroborobo ny tetikasa eo amin'ireo vondrom-piarahamonina mety liana handray anjara sy mandrindra ny fandraisan'anjaran'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fanadihadiana
Mitarika fikarohana momba ny loharanom-baovao sy hevitra ara-tantara mifandraika amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika miaraka amin'ny ekipan'ny RV/NF;
Mandrakitra ny fizotry ny tetikasa amin'ny torolalana, ary manampy amin'ny famokarana ireo karazana fandraketana hafa;
Fivoriana isak'herinandro/indroa isak'herinandro miaraka amin'ireo talen'ny NF sy RV sy ireo mpikambana hafa mba hitatitra ny zava-bita;
Mizara tantara sy vaovao momba ny tetikasa miaraka amin'ny fiarahamonina Global Voices, amin'ny alalan'ny fantsona, tahaka ny WhatsApp, Google Groups sy ny Community Blog; ary
Manome fanohanana, anisan'izany ny fitadiavana mpiasa sy manitsy lahatsoratra,ho an'ireo mpandika lahatsoratra sy mpanoratra izay mamokatra votoaty antserasera mifandraika amin'ny feo voahilikilika sy ny fisoloantena amin'ny fampahalam-baovao.
Manao tatitra any amin'ny Talen'ny NewsFrames ny Mpitarika, ary hiara-hiasa akaiky amin'ny talen'ny Rising Voices ihany koa. Hiara-hiasa akaiky amin'ireo mpikambana amin'ny fiarahamonina GV ihany koa ny mpitarika, anisan'izany ny newsroom [efitra famoaham-baovao], ny tonian-dahatsoratra ara-paritra sy ara-piteny, ary ny mpanoratra mpilatsaka an-tsitrapo.
Asa tapak'andro izany, ary onerana amin'ny karazana matoan-dahatsoratra GV. Hanomboka amin'ny faran'ny volana Febroary farafahatarany ny asa ary haharitra enimbolana, mety hitarina raha mahafa-po ny vokatra. Ny kandidà ilaina dia:
Za-draharaha amin'ny fanoratana lahatsoratra;
Mahafehy ny teny Anglisy ary mahay tsara ny teny Espaniola;
Manana traikefa amin'ny fiarahamiasa amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika;
Ampy fahalalana amin'ny fahaizana solosaina sy ny teknika ain'ny fampiasana haingana ny fitaovana MediaCloud ;
Mahay sy manana traikefa momba ny fandikana mitovy- fanitsiana lahatsoratra;
Tsy manana olana amin'ny tontolo somary ratsy rafitra, ary tia manampy amin'ny famariparitana dingana sy politika;
Mahay mifandray amin'ny maha mpikambana ao anaty ekipa miparitaka ao anatin'ny tontolo virtoaly tanteraka;
Mpandrindra antserasera za-draharaha.
Tombontsoa ny fananana traikefa amin'ny fanoratana sy fanitsiana lahatsoratra ato amin'ny Global Voices. Hanampy anao ihany koa ny fahalianana sy fahaizana lalina na traikefa amin'ny fanadihadiana tahiry, ary ny traikefa momba ny fikarohana.
Ahoana no fomba handefasana ny fangatahana
Raha liana handefa fangatahana ianao, dia alefaso ny mombamomba anao sy valinteny fohy amin'ny teny Anglisy amin'ireo fanontaniana ireo:
Ahoana no hamaritanao ny hoe “vondrom-piarahamonina voahilikilika”?
Inona avy ireo fanamby andrasanao rehefa manoratra tantara vaovao momba ny vondrom-piarahamonina voahilikilika, ary ahoana no fomba handresenao izany fanamby izany?
Inona no andraikitry ny Hetsika NewsFrames-Rising Voices sy ny Mpitarika Fiarahamonina mahafinaritra anao?
Mba hanekena ny fangatahanao, alefaso malaika any amin'ny newsframes [ao amin'ny] GlobalVoices [teboka] org hatramin'ny 27 Janoary (11:59 EST hariva Ora Atsinanana Mahazatra) miaraka amin'ny lohateny: “NewsFrames-Rising Voices Community Lead application” ny fangatahanao.
Tianay hanomboka tsy tara amin'ny faran'ny volana Febroary ny asa. Raha manana fanontaniana ianao, aza misalasala mandefa izany mivantana any amin'ny adiresy mailaka eo ambony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/01/25/94681/